ग्लोबल आइएमई बैंकको दशौँ बार्षिकोत्सवमा के के भयो ? « अर्थबजार – आर्थिक विकासको लागि सञ्चार
ग्लोबल आइएमई बैंकको दशौँ बार्षिकोत्सवमा के के भयो ?
२४ पुष २०७३, आईतवार ०५:३६
काठमाडाै २४ पुस । ग्लोबल आइएमई बैंकले दशौैँ बर्ष पूरा गरी एघारौैँ बर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा बिगतका वर्षहरुमा जस्तै यसबर्ष पनि बिभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।
दशौँ बार्षिकोत्सवको अवसरमा बैंकले पुस २३ गते राजधानीमा बित्तीय साक्षरता जगाउने उद्देश्यले प्रभातफेरी कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । “बचत गरौँ” भन्ने मूल नाराका साथ काठमाण्डौँमा आयोजना गरिएको प्रभातफेरी कार्यक्रममा उपत्यकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको उल्लेख्य सहभागिता थियो । प्रभातफेरी कार्यक्रम बैंकको कान्तिपथ शाखादेखि सुरु भएर दरबारमार्ग, घण्टाघर, रत्नपार्क, शहिदगेट, न्यूरोडगेट, बीर हस्पिटल, जमल हँुदै पुनः कान्तिपथ शाखामा नै आएर समापन गरिएको थियो ।
प्रकाशित : २४ पुष २०७३, आईतवार ०५:३६